Slovenia Passes Law Requiring Central Bank to Cover Losses From 2013 Banking Overhaul | Myanmar Business Today
Home Business International Slovenia Passes Law Requiring Central Bank to Cover Losses From 2013 Banking...
The Slovenian parliament said it passed for the second timealaw on Friday requiring the Bank of Slovenia to cover all possible repayments to those who lost their investments during the country’s 2013 bank overhaul.
စလိုဗေးနီးယားပါလီမန်သည် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဘဏ်ပိတ်သိမ်းမှုအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများအတွက် ပေးချေမှုများ အား ဗဟိုဘဏ်ကကျခံပေးရမည့် ဥပဒေ တစ်ခုကို ဒုတိယအကြိမ် အတည်ပြုလိုက် သည်။
ယင်းဥပ‌ဒေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား တရားဥပဒေအကာအ ကွယ်မပေးထားသော သော အထက်လွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းသည့် ဥပဒေကို ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဥပဒေကို ရေးဆွဲခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာ ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဤဥပဒေမှာ ဘဏ်များကို ငွေစိုက်ထုတ် ကယ်တင်ပေးရသည့်ကာလ တွင် ဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ များကို ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးရန် လွှတ်တော်ကို တိုက်တွန်းထားသည့် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ် ချက်နှင့်အညီဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် အစိုးရသည် ယူရိုငွေ ၃ ဘီလီအသုံးပြုလျက် ေြ<ွကးမြီပြန်မရသဖြင့် အခက်ကြုံနေသောနိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များကို ပြို လဲမသွားအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သို့ သော် အဆိုပါဘဏ်များက ထုတ်ပေးထား သည့် ယူရိုငွေသန်း ၆ဝဝ တန်ဖိုးရှိ စာချုပ် များ၊ ရှယ်ယာရှင် တစ်သိန်း၏ ရှယ်ယာများ ကိုတော့ ပယ်ဖျက်ခဲ့ရသည်။
SOURCEMarja Novak (Reuters)
Previous articlePhysical Oil And Futures Align To Tell Story Of A Tighter Market
Next articleTAT Partners with Visa Myanmar to Promote Tourism, Digital Payments